Czech Republic machibidoro ndị anaghị agba ọgwụ mgbochi n'ọha ọha niile
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Czechia » Czech Republic machibidoro ndị anaghị agba ọgwụ mgbochi n'ọha ọha niile
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa na Czechia • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Czech Republic machibidoro ndị anaghị agba ọgwụ mgbochi n'ọha ọha niile.
A ga-egbochi ndị bi na Czech ndị na-enwetabeghị ọgwụ mgbochi megide nje COVID-19 ịbanye n'ọha ọha dịka ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ ihe nkiri na ụlọ ahịa malite na Mọnde, Nọvemba 22.
Czech Republic na-ahụ mmụba nke ọrịa, yana ndekọ ikpe ọhụrụ 22,479 kọrọ na Tuesday.
Ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ na-arị elu; ọnọdụ ahụ dị njọ. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ naanị ngwọta, ọ dịghị ọzọ.
Praịm Mịnịsta Czech kwara arịrị maka ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi maka imechi ụlọ ọgwụ na igbochi ọgwụgwọ iru ndị nwere ọrịa ndị ọzọ.
Czech RepublicPrime Minista na-apụ apụ Andrej Babis kwupụtara na mba ahụ ga-agbaso ihe a na-akpọ Bavaria site na Mọnde izu na-abịa, machibido ndị na-enwetabeghị ọgwụ mgbochi COVID-19 ịbanye n'ebe ọha. A ga-ahapụ ndị gbakere na nje a na nso nso a.
The Bavaria Ihe atụ na-ezo aka na usoro mgbochi COVID siri ike ewebata na steeti ndịda German. Markus Soder, BavariaOnye isi ala, kwuru na ọ nweghị nhọrọ ọzọ ma ọ bụghị imejuputa "ụdị mkpọchi maka ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi," na-ekwu maka nrụgide na-abawanye n'ụlọ ọgwụ na ndị ọrụ ahụike.
Czech Republic A ga-egbochi ndị bi na-agbabeghị ọgwụ mgbochi megide nje COVID-19 ịbanye n'ọha ọha dịka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ihe nkiri na ụlọ ahịa malite na Mọnde, Nọvemba 22.
Agakwaghị anabata ule COVID-19 na-adịghị mma.
Onye isi ala ahụ kwuru na a ga-akagbu nyocha onwe onye kpamkpam, ebe ọ kwara arịrị maka ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi maka imechi ụlọ ọgwụ na igbochi ọgwụgwọ iru ndị nwere ọrịa ndị ọzọ.
“Ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ na-arị elu; ọnọdụ ahụ dị njọ. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ naanị ihe ngwọta, ọ dịghị ọzọ, "o kwukwara.
Mba a ga-abanye na mkpọchi akụkụ nke ndị na-agbaghị ọgwụ mgbochi site n'ụtụtụ Mọnde, na-eche na ndị ụlọ ọrụ akwadoro mmachi taa.
"Anyị ga-ewebata ihe Bavaria nlereanya si Sunday ruo Monday. Nke a pụtara na a ga-ahapụ ịbanye n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ọrụ ọrụ, ma ọ bụ mmemme ọha maka naanị ndị gbara ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ndị lanarịrịnụ. Ndị ejiri otu ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ga-enwerịrị ule PCR, "Babis kwuru na TV mpaghara.
The Czech Republic na-ahụ mmụba na ọrịa COVID-19, yana ndekọ ikpe ọhụrụ 22,479 kọrọ na Tuesday a gafere.
Ebe 68% nke ndị mmadụ na-agba ọgwụ mgbochi ọrịa na Germany, yana 65% na Austria, ihe karịrị 60% na-agba ọgwụ mgbochi ọrịa. Czech Republic.